ကျွန်တော်နှင့် တီကေ+အမေ (စ\_ဆုံ) – alanlaymyar
ကျွန်တော်နှင့် တီကေ+အမေ – စ\_ဆုံး
ko si -ရေးသည်။ အင်းစက်စာပေဖြစ်ပါသည်။
အရင်​ဆုံး ကျွန်​​တော့်​နာမည်​ကို မိတ်​ဆက်​ပါရ​စေ
ကျွန်​​တော်​ နာမည်​ ​ဝေလင်း အသက်​က ၁၄ နှစ်​
​ဝေလင်းတို့ မိသားစုမှာ သူ အပါ အဝင်​ အ​ဖေနှင့်​ အ​မေ
ရယ်​ သူ့အ​ဒေါ် ​ကေသီရယ်​ ၄ ​ယောက်​ဖြစ်​ပါသည်​
တီ​ကေနှင့်​ သူမှာ သူမက သူ့ထက်​ ၁၀ နှစ်​​လောက်​ပဲ
တီ​ကေ၏ အသက်​မှာ ၂၄ နှစ်​ခန့်​ပင်​ ရှိ​သေးပီး
သူမသည်​ ​ကျောင်းပြီး ဘွဲ့ရပီးထဲက အ​ဖေ အ​မေတို့
Company တွင်​ပင်​ ဝင်​​ရောက်​လုပ်​ကူ​ပေး​နေသည်
​ဝေလင်းကို​တော့ တီ​ကေသည်​ မိမိ ငယ်​စဉ်​ထဲမှ
သူမသည်​ မိမိ၏ အ​မေ ​ဒေါ်​ဒေစီ၏ ညီမအငယ်​ဆုံးပင်​ဖြစ်​သည်
တီ​ကေသည်​ သူမ​ကျောင်း​နေစဉ်​က Queen ဖြစ်​
သည့်​အတွက်​ ယခုအချိန်​ထိ သူမ၏ ကိုယ်​လုံး​လေး
အ​မေတို့ ညီအမသည်​ အရပ်​မြင့်​ကြပီး ကို​ယ်​လုံးကိုယ်​
​ပေါက်​မှာလည်း တစ်​​ယောက်​တစ်​မျိုး ​အချိုးအစား​ပြေပြစ်​ကာ လှပကြ​လေသည်​
တီ​ကေနှင့်​ အ​မေသည်​ ​နေ့စဉ်​ပုံမှန်​ gym ​ဆော့ကြသဖြင့်​ သူမတို့၏ ဗိုက်​သားများမှာ ရှပ်​ရပ်​ကာ
အဆီမရှိရာ မို့​မောက်​​သော ရင်​အစုံ ​သေးသွယ်​သည့်​
ခါးနှင့်​ လုံးဝန်းကားစွင့်​​သော တင်​ပါးကြီးများမှာ လမ်း
​လျှောက်​လိုက်​လျင်​ တုန်​ခါတက်​သွားသည်​ဖြစ်​ရာ မြင်​
ရသူ ပုရိသ မည်​သူမဆို သူမတို့၏ ဖင်​ကြီးများကို
ထိုအထဲတွင်​ သူလည်း ပါပါသည်​
​ဝေလင်းလင်းသည်​ ဟိုတ​လောက သူ့အ​ဖေနဲ့ အ​မေက
သူပူဆာသဖြင့်​ ဖုန်းဝယ်​​ပေးရာ အင်​တာနက်​မှ အပြာကားများ မိသားစုအတွင်းရှိ ​သွေးသားရင်းခြာ
များ ကာမဆက်​ဆံသည့်​ ဇာတ်​လမ်းများကို ​ဒေါင်းထား
ကာ ကြည့်​ပီး သူအ​ဒေါ် ​ကေသီနှင့်​ အ​မေဖြစ်​သူ ​ဒေါ်​ဒေ
စီအား စတင်​ကာ ပစ်​မှားလာမိသည်​
သူသည်​ နို့ဖြတ်​ပြီး အရွယ်​မှ စကာ ဒီအရွယ်​ထိ တီ​ကေ
ဖုန်းထဲမှ ​အောကားကြည့်​ပီး သူ အိပ်​ချင်​လာ​ရွေ့ အ​စော
ညတ​ရေးနိုးကျ​တော့ မိမိဘက်​ကို ​ကျော​ပေးအိပ်​ထား
​သော​ကြောင့်​ ……. တီ​ကေ၏ ဖင်​ကြီးမှာ ​နောက်​သို့
ဆူထွက်​​နေပီး သူမ ညဝတ်​ ဂါဝန်​အပါး​လေး အတွင်းမှ
ဖင်​သား​ဖွေး​ဖွေးများနှင့်​ ​ဖြောင့်​တန်း​ရွေ့ သွယ်​ဆင်း
လျက်​ရှိသည့်​ ​ပေါင်​သား​လေးများ ​ခြေသလုံးသား​လေးများအား ​တွေ့ကာ ​ဝေလင်း သူ့
ညဝတ်​ ​ဘောင်းဘီအတွင်းမှ လီးဟာလည်း …. တဆတ်​
ဆတ်​တုန်​ကာ ​ရှေ့သို့ ထွက်​​နေ​လေသည်​
​ဘောင်းဘီအတွင်းမှ လီးကိုထုတ်​ကာ သူ့ တီ​ကေ၏
ဖင်​​ပေါ်သို့ သူမ ဂါဝန်​​လေးကို အသာမတင်​ကာ
​ရှေ့တိုး​နောက်​ဆုတ်​ ဂွင်းတိုက်​လိုက်​ရာ သူ့ လ​ရေများ
သူမ ဖင်​​ပေါ်တွင်​ ​ပေသွားသည်​
သူလည်း ဂါဝန်​​လေးပြန်​ဖုံး​ပေးပီး သူမ နိုးမနိုး ကြည့်​ရာ
အိပ်​​နေ​ကြောင်း​တွေ့မှ စိတ်​​အေးကာ သူ့တီ​ကေကို
မနက်​ သူမ အိပ်​ယာနိုး​တော့ သူမ ဖင်​​ပေါ်တွင်​ ​​ခြောက်​
ကပ်​ကပ်​အရာကိုစမ်းမိပီး ဘာပါလိမ့်​ဆိုကာ လက်​နဲ့
စမ်း ပီး နမ်းကြည့်​ရာ စိမ်း​ရွှေ​​ရွှေအနံ့ ရသဖြင့်​ ဒါ
သိတာ​ပေါ့ သူမလည်း အသက်​ ၂၄​တောင်​​ရောက်​ပီဆို
​တော့ ကိုယ်​တိုင်​သာ လိင်​မဆက်​ဆံဖူးတာ သူမ ဖုန်း
ထဲတွင်​​တော့ တခါတရံ ​အောစာအုပ်​များဖတ်​ဖူးထားလို့
​ဝေလင်း ညကသူမ ဖင်​​ပေါ် ဂွင်းထုပီး လ​ရေများ ဖြန်း
သို့​ပေမယ့်​ တူ​လေးကို ချစ်​​သော​ကြောင့်​ သူမကိုယ်​တိုင်​
ကလည်း လိင်​ကိတ်​စ အ​တွေ့အကြုံ မရှိ​သော​ကြောင့်​
သို့ဖြင့်​ ညညဆို သူက တီ​ကေ၏ ဖင်​​ပေါ်သို့ ဂွင်းထု
ပီး သူ့ လ​ရေများဖြင့်​ တင်​​ပေးတာ အတန်​ကြာ​သော
အခါ ​နောက်​တဆင့်​ တက်​ချင်​လာပီး သူမအဖုတ်​ထဲ
တည​ပေါ့ ……. သူတို့ တူဝရီး အိပ်​ကြရာ သန်း​ခေါင်​
အချိန်​တွင်​……. သူ အိပ်​ယာမှ ​သေး​ပေါက်​ချင်​ကာ
​သေး​ပေါက်​ပီး ကုတင်​​ပေါ်သို့ တက်​လာပီး… သူမ
​ဘေး ဝင်​လှဲပီး သူ့ဘက်​ ​ကျော​ပေးကာ အိပ်​​နေ​သော
သူမ၏ ဖင်​ကြီးကိုကြည့်​ကာ ဂွင်းထုလိုက်​ရာ သူ၏လီး
သူမ ညဝတ်​ ဂါဝန်း​လေးအား ခါး​ပေါ်လှန်​တင်​ကာ
သူမအဖုတ်​ဝထဲသို့ ​နောက်​မှပင်​ လီးနှင့်​​တေ့ကာ
စွိ ဖွတ်​ ပလွတ်​ ဆိုပီး သူ့လီးမှာ ကြပ်​သိပ်​စွာ အဖုတ်​ထဲ
ဝင်​​ရောက်​ကာ အထဲမှ တခုခုက ခံသလိုဖြစ်​ရာ ခါး​ကော့
ပီး ​ဆောင့်​ချလိုက်​စဉ်​ ….. ဒုတ်​ …. အ အင့်​ ဆိုကာ
တီ​ကေနှုတ်​မှ ညီးညူကာ နိုးလာပီး ဟင်​
သားသား ဘာလုပ်​တာလဲ ဒါ မင်း ကိုယ့်​အ​ဒေါ်ကို
ပြန်​လိုးရလား ဆိုပီး ​သူမက ​ပြောလိုက်​သည်​
တီ​ကေကို သားလိုးချင်​လာလို့ပါ ….. ခွင့်​ပြုပါ​နော်​
သူသည်​ ​ပြောလည်း​ပြော ​နောက်​မှလည်း လိုး​နေရာ
မကြာခင်​ သူမလည်း အဖုတ်​ကလည်းနာ ခံလို့ကလည်း
​ဝေလင်းလည်း သူ့ တီ​ကေ၏ အပျိုစင်​ပန်းအား သူစား
ခါးကြီး​ကော့ပီး ​ဆောင့်​လိုးကာ သူမ၏ အဖုတ်​ထဲသို့
​နောက်​​နေ့မနက်​​ရောက်​​တော့ တီ​ကေက သူ့ကို
အရင်​လိုပင်​ ​ပြောဆိုဆက်​ဆံရာ ​တွေ့မှ သူ စိတ်​​အေး
ည​ရောက်​​တော့ ကျွန်​​တော်​ …. ​ပေါ်တင်​ပဲ တီ​ကေကို
သူလိုးချင်​​ကြောင်း​ပြောရာ သူမကလည်း ခွင့်​ပြု​ပေး​တော့ ……. သူမ ဝတ်​ထား​သော ညဝတ်​ ဂါ
ဝန်​​လေးအား ချွတ်​လိုက်​ရာ ညအိပ်​ချိန်​မို့ သူမ ဘရာ
ခံမဝတ်​ထား ပင်​တီလည်း မဝတ်​ထားရာ ဘွားခနဲိ
​ပေါ် လာသည့်​ …..တီ​ကေ၏ နို့နှင့်​ ….. အဖုတ်​အား
မြင်​ရပီး သူမကို ကုတင်​​ပေါ် ပက်​လက်​လှဲ​စေရာ
​ပေါင်​ကြားသို့ သု၏ မျက်​နှာ အပ်​ကာ အဖုတ်​အား
လျာဖြင့်​ ယက်​​ပေးလိုက်​ရာ သူမ ​ကော့ထွက်​သွားသည်​
သားသား ​တော်​ပီ မယက်​နဲ့​တော့ တီ​ကေလိုချင်​ပီ
သူ့ ​ဘောင်းဘီကို ချွတ်​ကာ ​တောင်​​နေသာ လီးနှင့်​
သူမ အဖုတ်​ထဲထဲ့ကာ နို့နှစ်​လုံးကို သူ့လက်​ဖြင့်​ကိုင်​
စွိ ဖွတ်​ ဘလွတ်​ ဖတ်​ ဖတ်​ သူမဖင်​နှင့်​ သူ့ လအုရိုက်​သံ
တို့က အခန်းထဲမှာ စည်းချက်​ညီညီ… ထွက်ေ​ပါ်​နေ​ပေ
အ ရှီးဆိုကာ ခဏအကြာမှာ တီ​ကေပီးသွား​လေသည်​
အချက်​၃၀​လောက်​ ​ဆောင့်​လိုးလိုက်​တာ သူလည်း
သူမ၏ အဖုတ်​ထဲသို့ ….. လ​ရေများပန်းကာပီးသွား​လေ
သူမအဖုတ်​ထဲမှ သူ့ လီးကိုထုတ်​ပီး ကုတင်​​ပေါ်တွင်​
သူနှင့်​ သူမ အတန်​ကြာနား​နေကြပီး
တီ​ကေ၏ နို့များအား သူ့ လက်​နှင့်​ ပွတ်​သပ်​​ပေး​နေလိုက်​သည်​
သူမ၏ လက်​ကို ယုကာ…… သူ့ လီး​ပေါ် တင်​​ပေးပီး
ဂွင်းထု​ပေးခိုင်းရာ သူမက စိတ်​ပါ လက်​ပါပင်​ သူ့လီးကို
လက်​​လေးနှင့်​ နူးညံ့စွက်​ ထု​ပေး​နေပါသည်​။
သူမ လက်​ထဲတွင်​ သူ့လီးမှာ ​တောင်​လာပီဖြစ်​ရာ ..
သူမကို ​လေးဘက်​​ထောက်​ခိုင်း​လိုက်​ ပီး ….. သူမ
​နောက်​တွင်​ မုဆိုး ဒူး​ထောက်​ထိုင်​ပီး.. … အဖုတ်​ဝသို့
လီးနှင့်​ ​တေ့ကာ လိုးလိုက်​ပါသည်​။
ဖွတ်​ ဘွတ်​ လီးတစ်​​ချောင်းလုံး …… တီ​ကေ အဖုတ်​ထဲ
ဝင်​သွားပီး …… သူမ ခါး​လေးကို သူ့ လက်​နှစ်​ဖက်​နှင့်​
ဆုပ်​ကိုင်​ ပီး တဖုံးဖုံးနှင့်​ ​ဆောင့်​လိုး ​နေသည်​
အ ကျွတ်​ ကျွတ်​ ဗြလွတ်​ ပွတ်​ ဘလစ်​ ဘွတ်​
လိုး​နေရာ သူ၏ လီးထိပ်​မှယားလာကာ လ​ရေများပန်း
ပီး သူမ၏ အဖုတ်​တွင်း နံရံသို့ ဖြန်းပက်​ခါ သူပီးသွား
ပြီး ​ရှေ့​ဆင့်​ ​နောက်​ဆင့်​…… သူမလည်း အ ဟု
တိုးတိုး​လေး ညီးကာ ပီးသွားပါသည်​
ထိုအချိန်​တွင်​ အခန်းတ​ခါးကြားမှ ​ချောင်းကြည့်​​နေ​သော
မျက်​လုံးအစုံကို …. သူတို့မသိကြ​ပေ
​နောက်​မှ သူတို့ ကိုတခါးဝမှ ကြည့်​​နေ​သော မျက်​လုံးမှာ
သူ့ အ​မေ ​ဒေါ်​ဒေစီပင်​ဖြစ်​သည်
​သူတို့လည်း လိုးပီး​တော့ ​မော​မောဖြင့်​အိပ်​ကြရာ မနက်​
ဒီလိုနှင့်​.. .. သုနှင့်​ တီ​ကေတို့ လိုးလာကြတာ သူပင်​
ယခုဆိုလျှင်​ ၁၀တန်း စာ​မေးပွဲ ​တောင်​ ​ဖြေဆိုပီး
​နောက်​ကျ​တော့ တီ​ကေကို အ​မေနှင့်​ အ​ဖေက သူတို့
၏ Company မှ ရှယ်​ယာဝင်​ သူ​ဌေးတစ်​ဦးနှင့်​ အိမ်​
သူလည်း.. . တီ​ကေအိမ်​​ထောင်​ကျသွား​သော​ကြောင့်​
စာ​မေးပွဲ ​အောင်​စာရင်း ထွက်​​တော့ သူ ၁၀ တန်း​အောင်​
အချိန်​​တွေက တ​ဖြေး​ဖြေး ကုန်​ဆုံးလာကာ ယခုဆိုလျှင်​
သူပင်​ ဘွဲ့ရပီး သူဝါသနာပါသည့်​ အင်​တာနက်​ဆိုင်​​လေး
ဆိုင်​ကို လူငှါးဖြင့်​ထားကာ အိမ်​မှာပင်​​နေသည့်​ အချိန်​က
မိခင်​ဖြစ်​သူက အိမ်​မှာပဲ ​နေ​တော့ရာ ဖခင်​ဖြစ်​သူ ဦး
ယခုဆို သူသည်​ ယခင်​ထက်​လူ​ကောင်​လည်းထွား
ကာ အရပ်​အ​မောင်းမြင့်​မားပီး ​ချော​မောခန့်​ညားသည့်​
သူ၏ လီးမှာလည်း အရှည်​ ၉ လက်​မ လုံးပတ်​ လက်​တဆုပ်​စာ​လောက်​ရှိ​အောင်​ ဆွဲစက်​နဲ့ကျင့်​ပီး
ထဲကပင်​ဖြစ်​ပီး ဖာလည်းချဖူးပီး ​စော်​လည်း ၃​ယောက်​
​လောက်​ လိုးဖူးရာ မိန်းမကျမ်း​ကောင်း​ကောင်း​ကျေ​နေ
တ​နေ့​ပေါ့ …. သူ အိမ်​​ရှေ့ခန်း ဆိုဖာ​ပေါ် တွင်​ ပက်​
လက်​လှန်​ကာ ​နေစဉ်​ အ​မေဖြစ်​သူ ​ဒေါ်​ဒေစီသည်​
ငုံ့ကာ ​ခုံ​အောက်​ရှိ အမှိုက်​ များကို တမျက်​စည်းလှဲ
​နေသည်​ဖြစ်​ရာ သူမ၏ လည်​ဟိုက်​အတင်းမှ နို့နှစ်​
လုံးမှာ ဘရာအတွင်းမှ လျှထွက်​​နေတာကို သူ​တွေ့
လိုက်​ရ​တော့ ​အောက်​မှ သူ့လီးမှာ ​တောင်​လာ​လေသည်​
အ​မေကလည်း ​ဘော်​ဒီ အ​တော်​လှသည့်​ အကိတ်​ဖြစ်​
သူမအသက်​သည်​ ၄၁ နှစ်​ရှိပါပြီ
ပြင်​တတိဆင်​တတ်​ပီး ​နေ့စဉ်​ gym​ဆော့​သော​ကြောင့်​
သူမ၏ ကိုယ်​လုံးမှာ လုံးကြီး​ပေါက်​လှတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​
သူမ၏ ရင်​ ၃၆ ခါး ၂၈နှင့်​ တင်​မှာ ၃၉ဖြစ်​ရာ သား
ုဖြစ်​သူ မိမိပင်​ ပစ်​မှားမိသည်​
ထိုစဉ်​ တံမျက်​စည်းလှဲပီးသဖြင့်​ ​နောက်​သို့လှဲ့ကာ
မီးဖိုထဲဝင်​​သွား​သော အ​မေ၏ ဖင်​ကြီးများကိုကြည့်​ကာ
သူ့ပုဆိုး​ပေါ်မှ လီးကို လက်​နှင့်​ဆုပ်​ကိုင်​ကာ ပွတ်​​နေလိုက်​သည်​
​နောက်​​နေ့ သူ​ရေချိုးပီး​ရွေ့ အခန်းထဲဝင်​လာရာ အ​မေ
သူ့ ဗီရိုကို မမှီမကမ်း ​ခြေဖျား​ထောက်​ကာ အထဲမှ အဝတ်​များအားရှင်း​ပေး​နေရာ သူမ ဝတ်​ထားသည်​
က မိန်းမဝတ်​ဘ​လောက်​စ်​ အကြပ်​ခါးတင်​​လေးဖြစ်​
လို့ သူမ ခါးသား​ဖွေး​ဖွေး​လေးကို ​တွေ့လိုက်​ရသဖြင့်​
သူမ၏ ​နောက်​သို့ သူကပ်​ကာ
အ​မေဟု ​ခေါ်ပီး ……သူမ၏ ဖင်​ကြီးကို ထမီ​​ပေါ်က
ပွတ်​လိုက်​ရာ သူမက ဘာမှ မ​ပြော​သော​ကြောင့်​
အ​မေ့ဖင်​ကြားကို သူ့လီးမာမာကြီးနှင့်​ ဖိ​ထောက်​ကာ
သူမ လည်​ဂုတ်​ သား​လေးကို ပါးစပ်​နဲ့ နမ်းစုပ်​လိုက်​သည်​
အို သားရယ်​ အ​မေ့ကို ဘာ​တွေ လုပ်​​နေတာလဲကွယ်​
သား အ​မေ့ကို ချစ်​ချင်​လို့ပါ…… ဆို​တော့ သူမက
ဘာမှ မ​ပြော​ရွေ့ သူမ ထမီကို ခါး​ပေါ်သို့ ပင့်​တင်​ကာ
သူလီးကို အ​မေ၏ ​စောက်​ဖုတ်​ထဲ လိုးလိုက်​ပါသည်​
ဘွတ်​ ဖွတ်​ ဘလစ်​ တစ်​ တစ်​ ဆိုပီး …. သူ့လီးတ​ချောင်း
အ​မေက ဗီရိုကို အားယူကိုင်​ကာ ….. အ ကျွတ်​ ကျွတ်​
ဟု သားရယ်​ နာတယ်​ ​ဖြေး​ဖြေး ဆိုပီး သူ့ကို​ပြောပါတယ်​
​ဖြေး​ဖြေး​လေးပဲ အ​မေ့ ဖင်​ကြီးကိုလက်​နဲ့ကိုင်​ကာ ပုံမှန်​
စွိ စွတ်​ ဖွတ်​
အတန်​ကြာ​ဆောင့်​​နေရာ သူမက သား ရတယ်​
​ဆောင့်​ အ​မေ ခံနိုင်​လာပီဟု​ပြောပါသည်​
သူလည်း တဖုန်းဖုန်း တဖတ်​ဖတ်​ ​ဆောင့်​လိုးရာ
မကြာခင်​ သူမပီးသွားပြီး …. အချက်​၅၀ ​ကျော်​​လောက်​
လိုးလိုက်​ပီး အ​မေ့ ​စောက်​ဖုတ်​ထဲသို့ သူ့ လ​ရေများပန်​
မထင်​မှတ်​ပဲ အ​မေ့ကို လိုးလိုက်​ရလို့ သူ ​ပျော်​သွားပါ
ခဏအကြာတွင်​ သူမနှင့်​ သူ အဝတ်​များချွတ်​လိုက်​ကြ
ရာ ဝတ်​လစ်​စစ်​ဖြစ်​သွားပီး သူက အ​မေ့ကို ပက်​လက်​လှန်​​စေကာ သူမ၏ အဖုတ်​ထဲသို့ သူ့လျှာ
ဖြင့်​ထဲ့ကာ ​မွှေ​နေလိုက်​ရာ အဖုတ်​အတွင်းမှ သူမ၏
​တော်​ပီ သား ထ​တော့ ဆိုကာ သူ့ကိုအ​မေက ပက်​လက်​
လှန်​​စေလိုက်​ပီး သူ့လီးကို သူမပါးစပ်​ထဲထဲ့ကာ ​လွေ​ပေး​နေပါသည်​
ခဏအကြာ ​လွေ​ပေးပီး သူ၏ ​တောင်​မတ်​​နေ​သော လီး
​ပေါ်သို့ အဖုတ်​ဝ​တေ့ကာ ဖိပီး ထိုင်​ချလိုက်​​လေသည်​
အ ရှီး ဒုတ်​ အင့်​ သူ့လီးမှာ ရှည်​​နေ​သော​ကြောင့်​ အ​မေ့
အ ဟင်း ဟင်း .. နှုခမ်း​လေးကိုက်​ကာ သူမ သူ့လီး​ပေါ်
သူလည်း ​အောက်​မှ သူမ၏ နို့ကြီး နှစ်​လုံးကိုလက်​နဲ့
ကိုင်​ကာ ​ကော့တင်​​ပေး​နေပီး ခဏအကြာတွင်​ သူမကို
ပက်​လက်​လှန်​​ပေါင်ကားခိုင်းပီး .. ​ပေါင်​ကြားသို့
ပ​လောက်​ ပ​လောက်​ ဖွတ်​ ဇွိ ပွတ် ဖတ်
အားးးးး အီးးးးးးးး အားးးးးးးးးးးးးးးး​
အေူမ့နို့နှစ်​လုံးကို သူ့လက်​ဖြင့်​ဆုပ်​ကိုင်​ကာ တဖုန်းဖုန်း
​ဆောင့်​လိုးနေလိုက်သည်။ ခဏကြာတော့ အမေ့ကိုယ်
သူလည်း ​ဆောင့်​လိုးပီး မကြာခင်​ အ​မေ၏ ​စောက်​ဖုတ်​
ထဲမှ သူ့လီးကိုဆွဲစုပ်​​နေသဖြင့်​ သူ့ လီးရည်များကို
၁၉၄၈ ခု နှစ် … မြန် မာ နိုင်ငံ လွတ် လပ် ရေး ရ ပြီး ကာ စ အ ချိန် …။ဗြိ တိ သျှ နယ် ချဲ့မျက် နှာ ဖြူ အ ရာ ရှိ တွေ မြန် မာ့မြေ ပေါ် မှာ ဆက် လက် လုပ် ကိုင် နေ ဆဲ ပါ ။သစ် တော ဌာ န မှာ လဲ အ င်္ဂ လိပ် လူ မျိုး အ ရာရှိ […]
ရာဇ၀င်တွေနဲ့ ငါ ကျွန်နော့် မရီး နာမည်က မစု နာမည် အရှည်တော့ မပြောတော့ဘူးဗျာ ကျွန်နော် က ကျွန်နော့် အကို အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်ရင်းနေတယ် ကျွန်နော် နဲ့ မစု ဖြစ်ပျက်တာလေး တချို့ ပြောချင်လို့ပါ ။ နာမည်အရင်းတွေ အလုပ်အကိုင်တွေ တော့ အကုန်မပြောတော့ဘူးဗျာ ။ ကျွန်နော့် နာမည် ကို ဖိုးဇော်လို့ ပဲ မှတ်ထားလိုက်တော့ ။ကျွန်နော့် အကို အလုပ် နဲ့ နယ်ဆင်းသွားပီး တစ်ပတ်လောက် အကြာပေါ့ ။ မနက်ပိုင်း ကျွန်နော့် တူလေး ကို မူကြိုလိုက်ပို့ပီး အပြန် မစုက သူ့ကို ဈေးလိုက်ပို့ဦးဆိုပီးပြောတာ နဲ့ ဈေးလိုက်ပို့ဖြစ်တယ် ။ အဲ့နေ့က မစု […]
ကိုဇင်ကတွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်လုပ်နေတော့ နှင်းပွင့်ကလောတယ်.. နှင်း- အမလေးဟယ် နင့်ဟာကိုငါငယ်ငယ်လေးထဲကမြင်ဖူးနေတာပဲချွတ်မှာချွတ်စမ်းပါ ကိုဇင်လဲချွတ်ကတာပေါ့ ကိုဇင်လီးကိုတွေ့တော့နှင်းပွင့် မျက်စိပြူးကော လီးကတောင်နေတာမှ ကြည့်ရတာဒီကောင်လေး ဖီးတေတက်နေပီထင်တယ် နှင်းပွင့်ကတွေးတယ် နှင်းပွင့် လဲ ယောကျာ်းလီးကို ခုမှ အနီးကပ်ကြည့်ဖူးတော့ ခနတော့ကြောင်ငေးနေမိတယ်.. ကိုဇင်လဲ နှင်းပွင့်အမူအရာလေး ပါးစပ်ဟသွားတာလေးတွေ့တော့ ပိုဖီးတက်လာပီး လီးကို ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် ဂွင်းတိုက်နေမိတယ်.. ကိုဇင်ကမတ်တပ်ရပ်ဂွင်းတိုက်နေရင်း ဆိုဖာပေါ်ထိုင်ချလိုက်တယ် ညောင်းလာတာကိုး နှင်းပွင့်ကလဲဖုန်းကိုင်ပီးကိုဇင့်လီးကိုပဲသေချာငေးကြည့်နေတယ် ကိုဇင်က ၂ယောက်ထိုင်ဆိုဖာပေါ်မှာ နှင်းပွင့်ကဘေးက တစ်ယောက်ထိုင်ပေါ်မှာ .. ကိုဇင်ကသန်သန့်ပဲနေတက်လို့ သူ့လီးဟာ အမွှေးမျှင်ကင်းပီး ဖြူနေတာပဲ သူကလဲ တွေ့သမျှကောင်မလေးတိုင်းသူ့လီးမြင်ရင်စုတ်စေချင်ရမယ်ဆိုပီးသန့်စင်ထားတာကိုး.. ကြာတော့လဲ ရိုးလာဆိုသလို ကိုဇင်ဖီးကျဲသွားပီးလက်ညောင်းလာတယ် သူ့မှာ သူအမရှေ့မှာ ဂွင်းထုပြနေရတော့ အထူးအဆန်းဖြစ်နေပီး လန့်သလိုလိုလုဖြစ်နေတော့ ဖီးသိပ်မပါသလိုဖြစ်နေတယ်.. ကြာတော့နှင်းပွင့်ကစိတ်မရှည်တော့ဘူး နှင်း- ဟဲ့လုပ်လေ ဒီမှာ vdo ရိုက်နေတယ် […]
Total visitors : 32,504
Total page view: 115,348